Kutsvagisa / Zvinyorwa
Mr. Tian nechikwata chake vari kunyanya kutarisa mukupa kune dzimwe nyika zvine chekuita nebasa repamutemo kune vatengi vanoita bhizinesi mukati kana neChina kubva kumativi ese epasi.
Yedu masevhisi akaisirwa muzvikamu zviviri zvinoenderana nemhando dzevatengi: masevhisi emakambani emakambani, uye masevhisi kune vamwe vanhu, kusanganisira vatorwa kuChina, kunyanya muShanghai.
ZveMakambani Vatengi / Mabhizinesi
Seboka diki, isu hatizvirumbidze nezve yakazara, yakazara-yakazara masevhisi emutemo, asi, tinoda kuratidza kwedu kwakanangana uye kusimba kwatingaite zvirinani kupfuura vamwe.
1. Kunze Kunze Investment muChina
Isu tinobatsira vekunze vatengesi nekugadzira yavo yekutanga bhizinesi kuChina nekumisikidza yavo bhizinesi bhizinesi muChina, kusanganisira vamiriri hofisi, bhizinesi bazi, Sino-vekunze majoini mapato (equity JV kana chibvumirano JV), WFOE (zvachose vekunze varidzi bhizinesi), kudyidzana , fund.
Uye zvakare, isu tinoita M&A, kubatsira varimi vekunze mukuwana makambani epamba, mabhizinesi, uye zviwanikwa zvekushandisa.
2. Real Estate Mutemo
Iyi ndiyo imwe yenzvimbo dzedu dzekudzidzira umo takagadzira uye takaunganidza zvakapfuma ruzivo uye hunyanzvi. Isu tinobatsira vatengi ne:
(1) kutora chikamu muruzhinji kubhidha maitiro ekutengesa ivhu kushandisa kodzero kuwana nzvimbo inodiwa yekuvandudza zvivakwa kana zvinangwa zveindasitiri senge kuvaka mafekitori, matura nezvimwe.
(2) kufamba nemitemo inorema uye yakaoma uye nemitemo ine chekuita nekuvakwa kweprojekti yezvivakwa, dzimba dzekugara kana dzekutengesa, kunyanya mitemo yemaguta uye yekuvaka.
(3) kuwana nekutenga zvivakwa zviripo, zvivakwa senge imba yekushandira, chivakwa chehofisi uye zvivakwa zvebhizimusi, kusanganisira kuitisa kuferefetwa kwakakodzera pazvivakwa zviri kutaurwa, dhizaini, mutero uye manejimendi manejimendi.
(4) mari yezvivakwa yezvivakwa, chikwereti chebhangi, mari yekuvimba;
(5) dzimba dzekudyara muzvivakwa zveChinese, kutsvaga mikana pachinzvimbo chevashambadzi vekunze kugadzirisa, kugadzirisa zvekare uye kushambadzira zvakare zvivakwa zvakafanana.
(6) real estate / imba yekurenda, kurendesa pekugara, hofisi uye maindasitiri zvinangwa.
3. General Mutemo Mubatanidzwa
Panyaya yemabasa ese epamutemo emakambani, kazhinji tinopinda muchibvumirano chegore kana chegore chekuchengetedza nevatengi pasi pazvo zvatinopa zvinhu zvakasiyana siyana zvekubvunzurudzwa zviri pamutemo, kusanganisira asi kusingagumiri ku:
(1) general kushandurwa kwekambani mune bhizinesi bhizinesi chiyero, hofisi kero, zita rekambani, yakanyoreswa capital, kuvhurwa kwebhizinesi bazi;
(2) kuraira pamusoro pehutongi hwekambani, kunyora mitemo inotonga mashandiro emusangano wevashandi, musangano webhodhi, mumiriri wezvemitemo nemaneja maneja, mitemo inodzora kushandiswa kwesangano remubatanidzwa, nemitemo ine chekuita nekutungamira kwekukurudzira;
(3) kuraira pamusoro pebasa uye nyaya dzevashandi dzevatengi, kuongorora makondirakiti evashandi nemitemo yevashandi pamatanho akasiyana, kunyora bhuku revashandi, kudzingwa kwevanhu vazhinji, uye kuyananiswa kwevashandi nematare;
(4) kuraira, kunyora, kuongorora, kugadzirisa ese marudzi emakondirakiti ebhizinesi anoshandiswa mukuita kwebhizinesi revatengi nevechitatu mapato;
(5) kuraira nezvenyaya dzemitero maererano nemabhizinesi evatengi.
(6) ichipa rairo yezvemitemo pamazano ekuvandudza evatengi muChina mainland;
(7) ichipa rairo yezvemitemo pazvinhu zvekodzero dzezvehupfumi, kusanganisira kunyorera, kuchinjisa uye rezinesi repamutemo, chiratidzo, copyright nevamwe;
(8) kudzoreredza zvinogamuchirwa izvo zvakafanira nekutumira magweta tsamba pachinzvimbo chevatengi;
(9) kunyora, kuongorora makondirakiti emaroja kana zvibvumirano zvekutengesa zvezvivakwa zvakabhadharwa kana kuva zvevatengi zvehofisi yavo kana zvigadziko zvekugadzira;
(10) kubata nevatengi vevatengi zvisina hushamwari zvirevo, uye nekupa akakodzera kubvunzurudzwa pamutemo pairi;
(11) kuronga uye kuyananisa kukakavadzana pakati pevatengi nehurumende zviremera;
(12) ichipa ruzivo rwekutonga pamusoro pePRC mitemo nemirawu ine chekuita nebhizinesi revatengi; uye kubatsira vashandi vayo kuti vanzwisise zvirinani zvakafanana;
(13) kutora chikamu munhaurirano pakati peMutengi uye chero wechitatu bato pamusoro penyaya yekubatanidza, kutora, mubatanidzwa, kugadzirisazve, mubatanidzwa webhizinesi, kuchinjisa zvinhu uye zvikwereti, insolvency uye kudzima;
(14) kuitisa kuferefetwa kwakaringana kune vatengi vemabhizimusi ekudyidzana nekutsvaga marekodhi emakambani evakabatana vakadaro akachengetwa nemaindasitiri emuno uye commerce Bureau;
(15) kupa basa repamutemo pa uye / kana kutora chikamu munhaurirano pamusoro pekukonana nemakakatanwa;
(16) ichipa masevhisi ekudzidzisa zviri pamutemo uye hurukuro pamitemo yePPR kune manejimendi manejimendi nevashandi.
4. Arbitration uye Litigation
Isu tinobatsira vatengi vepasi rese mukuitisa mutongi nematare muChina mukutsvaga, kuchengetedza uye kuchengetedza zvido zvavo muChina. Isu tinomiririra vatengi vepasi rese mune angangoita ese makakatanwa ari pasi pehutongi hweChinese, sekupokana kwekubatana, chiratidzo, kutengesa kwenyika uye chibvumirano chekutenga, chibvumirano chekupa, zvibvumirano zvekupa mvumo zveIPR, kutengeserana kwenyika dzese uye dzimwe nharo dzekutengesa nemapato eChina.
YeVanhu / maExpats / Vatorwa
Munzvimbo ino yekudzidzira, isu tinopa akasiyana siyana mutemo ehurumende masevhisi ayo anodikanwa kazhinji nevatengi vega.
1. Mhuri Mutemo
Ini ndakabatsira vanoverengeka vekunze kana vekunze muChina nematambudziko avo anomuka pakati pevakaroora, nhengo dzemhuri. Semuyenzaniso:
(1) kunyora zvibvumirano zvavo zvepamberi pemuchato nevaroora vavo nezvikomba avo vanowanzo kuve varume kana vakadzi vechiChinese, uye nekugadzira imwe hurongwa hwemhuri pahupenyu hwemuchato hwemunguva yemberi;
(2) kuraira vatengi pamusoro pekurambana kwavo kuChina nekuronga mazano avo ekurambana mukuchengetedza zvido zvavo mune mamiriro enzvimbo dzakawanda dzakabatanidzwa mukutongwa uko kunowanzoomesera nzira yekurambana; kuraira pamusoro pekuparadzaniswa, kupatsanurwa kwemidziyo yewanano, zvivakwa zvemunharaunda;
(3) kuraira pamusoro pekuchengetwa kwemwana, kuchengetwa uye kuchengetwa;
(4) masevhisi ekuronga dzimba nekuremekedza midziyo yemhuri kana zvivakwa muChina zvisati zvafa.
2. Mutemo Wenhaka
Isu tinobatsira vatengi mukutora nhaka, nekuda kana nemutemo, masitendi akasiyiwa kana kusiirwa kwavari nevavanoda, hama kana shamwari. Nzvimbo dzakadai dzinogona kunge dziri dzimba chaidzo, mabhengi akachengeterwa, mota, zvido zvekuenzana, zvikamu, mari uye imwe mhando yemidziyo kana mari.
Kana zvichidikanwa, isu tinobatsira vatengi mukuita nhaka yavo nekutarisa kumatare edzimhosva ayo anogona kunge asingatsamwiri chero bedzi mapato ari kubvumirana pane zvavanofarira munzvimbo idzi.
3. Real Estate Mutemo
Isu tinobatsira vekunze kana vekunze mukutenga kana kutengesa yavo China zvivakwa, esp zvivakwa zviri muShanghai kwatinogara. Isu tinopa zano kune avo vatengi mune yakadaro yekutengesa kana yekutenga maitiro nekuvabatsira ivo kugadzira matengisirwo emitemo uye mamiriro uye kuona kune iko kuita kwezvibvumirano zvibvumirano.
Panyaya yekutenga imba kuChina, isu tinobatsira vatengi kuti vanzwisise zvirambidzo zvekutenga zvakaiswa pama expats, kubata nemapato ane hukama anosanganisira vatengesi, vatengesi nemabhangi uye kugadzirisa nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika dzinobatanidzwa mukuita uku.
Panyaya yekutengesa chivakwa muShanghai, China, isu hatingobatsira chete vatengi kuratidzira zvibvumirano nevatengi asi kuvabatsirawo kuchinjisa mari yavo yekutengesa mukuchinjana kwekunze senge madhora ekuUS uye tambo imwechete kubva kuChina kuenda kunyika yekumusha.
4. Employment / Labour Mutemo
Pano isu zvakare tinowanzobatsira expats vanoshanda muShanghai kubata nevashandirwi vavo esp mune nyaya dzemakakatanwa senge kusarongeka zvisina tsarukano uye kubhadhara mubhadharo nezvimwe.
Tichifunga mafungire akasarudzika eChina Labor Chibvumirano Mutemo uye mimwe mirau isina musoro, kune vakawanda vanoburitsa vari kuwana muhoro wakakura muChina, kana paine gakava nevashandirwi, vashandi vanosiiwa vari mumamiriro ezvinhu anonyadzisa apo vaifanira kukotamira pamberi pevashandirwi vavo vachiziva. kuti havana kudzivirirwa zvakanyanya pasi pemitemo yechiChinese yevashandi zvachose. Naizvozvo, tichifunga nezve njodzi dzakadai dzine chekuita nebasa reku expat muChina, tinokurudzira expats vanoshanda muChina kuti vauye kuzonzwika zviri pamutemo nemakambani avo kuti varege kumhanyiswa mumamiriro ezvinhu akaoma muChina.
5. Mutemo Wekukuvara Kwemunhu
Tabata nyaya dzinoverengeka dzekukuvara kwevanhu vanosanganisira vekunze kukuvadzwa mutsaona dzemumigwagwa kana kupokana. Tinoda kuyambira vekunze kuChina kuti vangwarire kukuvara kuChina nekuti pasi pemitemo yazvino yekukuvara kweChina, vatorwa vanowana muripo wakapihwa nematare eChina kwavari hazvitenderwe. Nekudaro, ichi chinhu chinotora nguva yakareba kuti chichinje.
Nyorera tsamba yemahara kuti uwane zvigadzirwa zvazvino uye ruzivo rwekudzikisira.
Mumiriri weMutemo weChina Kambani, China Dhivhosi Mutemo Wakasimba, China Mhuri Yemutemo Yakasimba,